လူမဆန်သောလူသားမိဘနဲ့ ကြွေလွင့်သွားရသော အသက်တစ်ချောင်း ! | လမင်းငယ် (ကြုံတွေ့ခဲ့သော ဘ၀ စာမျက်နှာများ)
လူမဆန်သောလူသားမိဘနဲ့ ကြွေလွင့်သွားရသော အသက်တစ်ချောင်း !	March 30, 2012
Filed under: စိတ်ကူးထဲက..စာ — လမင်းငယ် @ 2:25 am
အစိုင်အခဲလေးနှစ်ခု…လေးထောင့်မကျ၊ စက်ဝိုင်းလည်းမဟုတ် ရှည်မျှောမျှောလည်း မဆိုသာ။ ဘာပုံစံမှန်းမသိသော အစိုင်ခဲလေးတွေ..ဒါပေမဲ့ သူတို့ စကားပြောတတ်သည်။ တိကျ စွာဖော်ပြရမည်ဆိုပါလျှင် သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလတစ်ခုတွင် လူကလေးများဖြစ်လာမည့် သန္ဒေသားလောင်းလေးများပင်ဖြစ်သည်။ သူတို့ဘေးတွင် အလွန်တရာချောမောလှပ သော နတ်သားလေးတစ်ပါး။ ထိုနတ်သားလေးက လူကလေးများဖြစ်လာမည့် သားလောင်းလေးများကို သူတို့သွားရမည့်နေရာကို သတ်မှတ်ပေးရသူ၊ စီမံခန့်ခွဲပေးရသူပင်ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် ကျယ်ပြန့်သော မိုးကောင်းကင်ကြီး၏တစ်နေရာ တိမ်စိုင် တိမ်လိပ်များကြားရှိ ဗိမ္မာန်လေးတစ်ခုတွင်နေကြပြီး ကမ္ဘာမြေပြင်ကိုကြည့်ကာ စကားပြောနေကြခြင်းဖြစ်သည်။
“ဟိုမှာတွေ့လား၊ တဲအိမ်လေး..ကလေးတွေလည်း အများကြီး၊ ပြီးတော့ မီးဖိုချောင်လေးမှာ ချက်ပြုတ်နေတာ မင်း အမေပဲ၊ မင်းက သူ့ဆီ သွားရလိမ့်မယ်၊ အဲဒါ မင်းမိသားစုပဲ.“
ဟု နတ်သားလေးက အစိုင်ခဲလေးတစ်ခုအား ပြောသည်။ ထိုအစိုင်ခဲလေးက ပျော်နေသည်။ မကြာခင် သူသည် သားလောင်းလေးအဖြစ် သူ့အမေ၏ ၀မ်းဗိုက်ထဲတွင် ၀င်ရတော့မည် မဟုတ်ပါလား ။
နတ်သားလေးမှဆက်ပြီး နောက် အစိုင်ခဲလေးတစ်ခုသို့..
“မင်း သွားရမဲ့နေရာကတော့ ဟိုဖက်မှာကြည့်လိုက် ဆိုပြီး ကမ္ဘာမြေပြင်တစ်နေရာကို ညွှန်ပြသည်။ ပြီးမှ “လက်တွဲပြီး လမ်းလျှောက်နေတဲ့ စုံတွဲကိုတွေ့လား၊ အဲဒါ မင်း အမေ နဲ့ အဖေပဲ“
ဟုဆိုတော့ ကျွန်တော် အသေချာကြည့်လိုက်သည်။ အားပါး..ကျွန်တော့် အဖေ နဲ့ အမေတဲ့..ချောလိုက်တာ..ကျွန်တော် လွန်စွာမှ ပျော်ရွှင်သွားသည်။ ကျွန်တော့် အမေ ဆိုသူကို ပြန်ကြည့်မိသည်။ တဖန် ပို ပျော်သွားမိပြန်သည်။
ထိုသို့ပြောဆိုပြီးနောက် နတ်သားလေးမှာ ပျောက်ကွယ်သွားသည်။
ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်သည်လည်း နတ်သားလေးသတ်မှတ်ပေးထားသော အမေ အသီးသီး၏ ခန္ဒာကိုယ်ဆီသို့ ၀င်ရောက်ကြလိုက်သည်။
“မောင်ရေ..မင်္ဂလာရှိတဲ့ သတင်းလေးပါပဲ၊ ကျွန်မမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြန်ပြီ…“ဟု ရှက်ပြုံးလေးဖြင့် မိန်းမ က ပြောတော့ ယောက်ျားဖြစ်သူက ၀မ်းသာအားရပင်..
“ဟာားး…သားသမီးဆိုတာ ရတနာပဲကွ၊ ဘုရားပေးတဲ့ လက်ဆောင်ပဲ..၀မ်းသာစရာပါပဲ “ ဆိုပြီး ကလေးများစွာကို ကြည့်ရင်း ပြုံးရွှင်စွာ ပြောလေသည်။ အစိုင်ခဲလေးကတော့ ပြုံးပျော်နေလေသည်။
ဒုတိယ အစိုင်ခဲလေး ..ကျွန်တော်။
ကျွန်တော့်အဖေ နှင့် အမေသည် တိတ်ဆိတ်သောနေရာလေးတွင် တည်ရှိနေသည်ဟု ထင်မိသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် မည်သည့် အသံမှ မကြားရသောကြောင့်ပင်။ ကျွန်တော့ အမေ မှ စပြောသည်။
“ကျွန်မမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိနေတယ်ဆိုတာ သေချာသွားပြီ၊ အဲဒါ ရှင် ဘယ်လို တာဝန်ယူပေးမှာလဲ “ ဟု ပြောလေသည်။
အဖေက ဒေါသ တကြီးဖြင့်..
“မင်းကွာ..ငါ ဆေးသောက်ပါလို့ ပြောထားရဲ့သားနဲ့ ခုတော့..ဒီကလေးကို ဘယ်လိုလုပ်ယူလို့ရမလဲကွ၊ ငါတို့ကလေးယူလို့မရတဲ့အခြေနေကို သိရဲ့သားနဲ့..မင်းကွာ…“
ကျွန်တော် နားထောင်နေမိသည်။ အမေမှ ဆက်ရွေ့
“သိပါတယ်..ကျွန်မလည်း မထင်မိလို့ ဆေးမသောက်မိတာ..ခုဟာက..“
“ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မရရ အောင်ဖျက်ကွာ၊ လိုအပ်တဲ့ငွေ ငါ အကုန်ပေးမယ် “
အဖေ၏ အမိန့်၊ ကျွန်တော် တုန်လှုပ်သွားမိသည်။ ကျွန်တော့်ကို ဖျက်ချတော့မည်တဲ့..ကျွန်တော့်ကို သတ်တော့မည်တဲ့၊ ကျွန်တော့ အဖေ နဲ့ အမေ ကျွန်တော့်ကို အလိုမရှိကြဘူးတဲ့..ကျွန်တော်ကြောက်လန့် တုန်လှုပ်စွာ အော်နေမိသည်။ မသတ်ပါနဲ့ ..ကျွန်တော့်ကို မသတ်ကြပါနဲ့ဗျာ..ကျွန်တော် မသေချင်ဘူးဗျာ..ကျွန်တော် တုန်လှုပ်စွာ အော်ပြောနေပေမဲ့ အမေ နဲ့ အမေ ကတော့ ကျွန်တော့ တောင်းပန်သံကို ကြားမှာ မဟုတ်ပါဘူးလေ..
ကြီးမားလေးလံသော အရာတစ်ခုက ကျွန်တော့်အပေါ် တစ်ခါတရံ လာဖိသည်ဟု ခံစားရသည်။ တစ်ချက် တစ်ချက် နာကျင်စွာ ခံစားရသည်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပင် အမေ၏ အော်ညည်းသံကိုပါ ကြားလိုက်ရသည်။
“အမလေး..နာလိုက်တာ အဒေါ်ရယ်..ဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါ..အရမ်း မဖိပါနဲ့…အား..“
ရပ်ကွက်တစ်ခုထဲမှ လက်သည်တစ်ယောက်နှင့် သားလောင်းလေးကို ဖျက်ချနေကြခြင်းဖြစ်သည်။
လက်သည်ဆိုသူ မိန်းမကြီင်္းက မည်မျှပင်ကြိုးစားစေကာမူ ထူးမခြားလာခဲ့..
ကျွန်တော် တောင့်ခံထားသည်။ ကျွန်တော် မသေချင်ပါ။ ကျွန်တော် လူဖြစ်ချင်သေးသည်။ ဒီကမ္ဘာမြေပြင်ကို အကျိုးပြုသော လူသားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်သေးသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် ကျွန်တော် တောင့်ခံထားသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ကျွန်တော့် အမေက..
“ အား..ကျွန်မ မခံနိုင်တော့ဘူး၊ အရမ်းနာနေပြီ..တော်ပါတော့ ကျွန်မ ဆက်မလုပ်ပါရစေနဲ့တော့ “ ဟု ဆိုကာမှ ကျွန်တော် သက်သာရာရသွားတော့သည်။ တော်သေးတာပေါ့..ကျွန်တော်တောင့်ခံထားနိုင်လို့။ မဖြစ်တော့ဘူး..ကျွန်တော့် အမေ ကို အိမ်မက် ပေးမှ ဖြစ်တော့မယ်..ကျွန်တော် ဒီည အမေ့ အိမ်မက်ထဲဝင်လိုက်သည်။ အမေ့ ကို တောင်းပန်သည်။ ကျွန်တော့်ကို လက်ခံဖို့။ ကျွန်တော် အမေ နဲ့ အဖေ သာမက ဒီကမ္ဘာမြေကို အကျိုးပြုမယ် ဆိုတာ ကျွန်တော့် အမေ ကို အိမ်မက်ထဲမှာ ပြောလိုက်သည်။
ကျယ်လောင်သော အော်သံကြောင့် ကျွန်တော် လန့်နိုးသွားခဲ့သည်။ အသေချာ နားထောင်ကြည့်တော့ အမေ နဲ့ အဖေ စကားများနေကြခြင်းဖြစ်သည်။
“ဟာာ..ရှင် မစာမနာ ပြောရက်တယ်..ဘယ်လောက်နာကျင်လဲ ရှင် သိလို့လား..ခံစားရတာက ကျွန်မရှင့်..`
အဖေ၏ အပြစ်တင်သံ၊ အမေ၏ ဒေါသတကြီး ပြန်လည်အော်ဟစ်သံ..ကျွန်တော့်ကြောင့် အဖေ နှင့် အမေ ရန်ဖြစ်နေရပြီ၊ ကျွန်တော် စိတ်တော့ မကောင်းပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် လူဖြစ်ချင်သေးသည်လေ။ ကျွန်တော် တတ်နိုင်သမျှ ရပ်တည်နိုင်အောင် ကြိုးစားရမည်လေ။
အမေ မှ ဆက်ပြောသည်။
“ကျွန်မ ဒီကလေးကို ယူလိုက်ချင်တယ်..ကျွန်မ ကို အိမ်မက် ပေးတယ်..သူ့ကို လက်ခံပါဆိုပြီး..“
“`တော်..“ အမေ့ စကားပင် မဆုံးသေး အဖေ ၏ တားမြစ်သံ ထွက်ပေါ်လာသည်..ပြီးမှ အဖေ စိတ်ပျက်စွာ ဆက်ပြောသည်။
“မင်းတို့ မိန်းမတွေက အဲဒါပဲ..လိုချင်တိုင်း လျှောက်ပြော..လျှောက်ယုံနေ..အိမ်မက်ဆိုတာ အလကားပဲ စိတ်စွဲလန်းလို့ မှတ်တာ ယုံမနေနဲ့…ပြီးတော့ အခြေနေ ကော ဘာထူးလဲ..“ဟု အမေ့ကိုမေးတော့ အမေက..
“မဖြစ်တော့ဘူးအဲဒါဆို ကြာရင်မင်းအတွက် မကောင်းဘူး..ဆေးခန်းပဲ သွားလိုက်ရအောင် နော်..“
ဆိုတဲ့ အဖေ့ အသံကို ကြားလိုက်ရသည်။ သူတို့ ကျွန်တော့်ကို နောက်တဖန် နောက်တနည်းနဲ့ သတ်တော့မယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် သိလိုက်သည်။
ဆေးခန်းရောက်တော့ ဆရာဝန်က “သွေးပေါ်ဆေး“ ဆိုတာကို ထိုးပေးလိုက်သည် တဲ့…
ကျွန်တော့် တစ်ကိုယ်လုံး နာကျင်လာသည်။ ပူလောင်လွန်းလှသည်။ မီးမြိုက်ထားသလိုပင် ခံစားရသည်။
“အား..နာလိုက်တာဗျာ..ပူလိုက်တာဗျာ..“ ကျွန်တော် တောင့် မခံထားနိုင်တော့..ကျွန်တော် ခံနိုင်ရည် မရှိတော့..ကျွန်တော့ အစိုင်ခဲ တစ်စိတ်တဒေသ အရည်ပျော်နေလေပြီ..ကျွန်တော် အသက်ရှူလို့ မရတော့…
ထိုအစိုင်ခဲလေးသည် မဖြည်းဖြည်း အရည်ပျော်ကျကာ သူ၏မိခင် ခန္ဒာကိုယ် အပြင်ဖက်ဆီသို့….
ကောင်းကင် တိမ်စိုင် တိမ်လ်ိပ်တွေကြားမှ တည်ရှိနေသော ဗိမ္မာန်လေးတွင် နတ်သားလေး စာအုပ်တစ်အုပ်နှင့် အလုပ်ရှုပ်နေလေသည်။
မိမိ ပို့ဆောင်ထားသော သားလောင်းလေးများ အခြေနေကို ကြည့်ရှူနေခြင်းဖြစ်သည်။
နတ်သားလေး မျက်နှာ ညိုးနွမ်းသွားသည်။
သူ ပို့ဆောင်လိုက်သော သားလောင်းလေး သေသွားပြီ ဆိုတာကို ၀မ်းနည်းစွာ သိလိုက်ရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ နှုတ်မှလည်း ရေရွတ်နေသည်။
“ဒီတခါ ပို့ဆောင်လိုက်တဲ့ သားလောင်းလေး လူ မိန်းမ သတ်လိုက်တဲ့ သားလောင်းလေးက ကမ္ဘာမြေပြင်အတွက် အထူးလက်ဆောင်ပေးထားတဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်ပဲ.ဒါကို ရက်ရက်စက်စက် သတ်လိုက်ကြပါလားကွာ..အတော်ကို မိုက်မဲ တဲ့ လူသားတွေပဲ..“ဟုဆိုရင်း ခေါင်းကို တွင်တွင်ရမ်းနေလေသည်။
ဒီ ကမ္ဘာမှာ မိခင်တွေ မိမိဆီ ရောက်ရှိလာပြီး လူမဖြစ်သေးတဲ့ သားလောင်းလေးတွေကို ဘယ်လောက်တောင်များ သတ်ခဲ့ပြီးပြီလဲ..
သင်သာ သတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ..သင်သတ်ခဲ့တဲ့ သားလောင်းလေးက နတ်သားလေး လက်ဆောင်ပေးတဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ သားလောင်းလေး ဖြစ်နေခဲ့မယ် ဆိုရင်ကော…….